म्यागजिन उचित छविहरू सिर्जना गर्न आन्तरिक फोटोग्राफी सल्लाहहरू - Print Peppermint
घर / डिजाइन ब्लग / असंगठित / म्यागजिन उचित छविहरू सिर्जना गर्न आन्तरिक फोटोग्राफी सल्लाह
आन्तरिक फोटोग्राफी: az मद्दत पत्रिकाहरू योग्य छविहरू सिर्जना गर्न
तपाईको आन्तरिक फोटोग्राफी खेल हेर्दै हुनुहुन्छ? तपाइँको वेबसाइटमा छविहरू साँच्चिकै पप बनाउनको लागि सुझावहरू पाउनको लागि पढिरहनुहोस्।
यो प्रयोग गर्न सजिलो छ फोटोहरूको लागि स्टक साइट, तर किन तपाईं पैसा खर्च गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं यसलाई कमाउन सक्नुहुनेछ?
तपाईबाट पैसा कमाउने धेरै तरिकाहरू छन् फोटोग्राफी कौशल, जस्तै तपाइँको अनलाइन स्टोर मा उत्पादनहरु लाई अनूठा वा बेच्न को लागी देखीन्छ फोटो नाफाको लागी।
डिजिटल लिँदै फोटो तपाइँको वेबसाइट को लागी वा एक मा बेच्न को लागी शेयर साइट गाह्रो छैन। प्रतियोगिता यद्यपि उच्च छ, त्यसैले तपाइँ प्रयोग गर्न को लागी तयार हुनुभयो र भित्री को बारे मा अधिक जान्न को लागी फोटोग्राफी बाहिर खडा गर्न को लागी प्रविधि।
शुभ समाचार यो हो कि त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् तपाईंको छविहरू यति देखि शानदार-गर्न को लागी।
किन एक पेशेवर देखिने कुरा
तपाइँबाट पैसा बनाउने फोटोग्राफी सँधै यसको मतलब यो होइन कि तपाई चित्रहरु नाफाका लागि बेच्न चाहानु हुन्छ। तिनीहरूलाई आफै प्रयोग गर्नाले तपाईंको आफ्नै व्यवसायलाई पनि फाइदा पुग्न सक्छ।
तपाइँको ब्लग वा व्यापार वेबसाइट मा पेशेवर छविहरु हुनेछ मदत तपाइँका उत्पादनहरू बेच्न। ग्राहकहरू राम्रो गर्न चाहन्छन् विचार के तिनीहरूले यति किन्दै छन् स्पष्ट र पेशेवर देखिने छविहरू हुनेछ मदत.
पेशेवर फोटोहरूको लागि गोप्य आन्तरिक फोटोग्राफी सल्लाह
प्रकाश प्रविधि बाट सम्पादन रहस्य को लागी, त्यहाँ तरीकाहरु को धेरै तपाइँको भित्री तस्वीरहरु लाई सुधार गर्न को लागी छन्। यहाँ कसरी पत्रिका को लागी तयार छ फोटो कि मानिसहरु तपाइँ बाट किन्न को लागी clamoring हुनेछ।
१. यसलाई स्थिर राख्नुहोस्: एक ट्राइपड प्रयोग गर्नुहोस्
क्यामेरा समात्दै यसलाई कुनै भित्री फोटोको साथ पखेटाउन कहिल्यै प्रयास नगर्नुहोस्। सट्टा, एक तिपाई मा लगानी यसलाई स्थिर राख्न।
यो पनि हुनेछ मदत तपाइँ सहि उही शट समय र फेरी दोहोर्याउन को लागी ताकि तपाइँ आईएसओ सेटिंग्स र जोखिम समय संग वरिपरि खेल्न सक्नुहुन्छ। यो हुनेछ मदत वातावरणको दायरामा प्रयोग गर्न तपाई उत्तम सेटिंग्स सिक्नुहुन्छ।
२ लाइटहरू बन्द गर्नुहोस्
हो, साँच्चै! तपाईंले फोटो खिच्दै गरेको कोठामा कृत्रिम बत्तीहरू बन्द गर्नुहोस् र अधिकतम प्राकृतिक प्रकाश बनाउनुहोस्।
यदि तपाईं वास्तवमै कृत्रिम प्रकाश प्रयोग गर्नुपर्‍यो भने, एक ह्यान्डहेल्ड फ्ल्यास र रिफ्लेक्टरको लागि अप्ट गर्नुहोस्। तपाईंको क्यामेरा पछाडि भित्तामा सीधा प्रकाशको लागि यी प्रयोग गर्नुहोस्, जुन तपाईंको फोटोमा प्राकृतिक देखिने चमक सिर्जना गर्न कठोर फ्ल्यासलाई फैलाउँदछ।
यदि तपाईं आरामदायक आन्तरिक हेराई पछि हुनुहुन्छ भने, यो अँध्यारो बाहिर पर्खनुहोस् र निम्त्याउने चमकको लागि नरम प्राकृतिक बत्ती वा स्ट्रिंग लाइटहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
Row. तपाईंको दृश्यको क्षेत्र संकुचन गर्नुहोस्
तपाईं कोठाको एक कुनामा कडा बस्न र शटमा अन्य तीन कुनाहरू पाउन प्रलोभनमा पर्न सक्नुहुन्छ, तर यो सँधै अनौंठो देखिन्छ।
बरु, फोटोग्राफ को लागी एक कुना को एक अधिकतम उठाएर आफ्नो दृष्टि को क्षेत्र साँघुरो। यो पनि तपाइँ प्राकृतिक प्रकाश र सिर्जना को धेरै बनाउन मद्दत गर्दछ गहिराई छविमा।
लिने प्रयास गर्नुहोस् फोटो मध्य कोठा को उचाई मा कोठा को, पनि। तपाइँ झुकाव लेन्स मा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ तर यिनीहरु लाई पनी पर्खालहरु सीधा देखिन्छ सुनिश्चित गर्न को लागी पोस्ट उत्पादन सम्पादन को एक धेरै आवश्यक छ।
Long. लामो शटर वेग प्रयोग गर्नुहोस्
लामो एक्सपोजरले प्राकृतिक प्रकाशको अधिकतम बनाउँदछ। डिजिटल क्यामेरासँग म्यानुअल विकल्पहरू छन् तपाईलाई शटर गतिको साथ वरिपरि खेल्न अनुमति दिन प्रकाश जोखिम अधिकतम बनाउन। यो पनि एक तिपाई प्रयोग गर्न को लागी अर्को ठूलो कारण हो - लामो हात शटर गति को समयमा तपाईंको हात हल्लाउने छ!
यदि कोठा तपाईंको आँखामा अन्धकार देखिन्छ भने पनि, सूर्यको प्रकाशको अधिक क्याप्चर गर्न एक्सपोजर समय विस्तार गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईले चाँडै नै वातावरण प्रयोगका लागि उत्तम शटर गतीहरू मात्र प्रयोग गरेर सिक्नुहुनेछ।
Professional. व्यावसायिक सम्पादन सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहोस्
भुक्तानीमा लगानी गर्ने विचार गर्नुहोस् डिजाइन सफ्टवेयर त्यो हुनेछ मदत तपाईं तेजस्वी सिर्जना समाप्त हुन्छ आफ्नो लागि फोटो.
नि: शुल्क सफ्टवेयर को चाल छ यदि तपाइँ साँच्चै नगद को लागी पट्टामा हुनुहुन्छ, तर सशुल्क अनुप्रयोगहरु मा सम्पादन सुविधाहरु को एक विस्तृत श्रृंखला एक शौकिया र पेशेवर को बीच फरक बनाउनेछ। समाप्त गर्नुहोस्.
तपाईं उन्नत ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ कि छैन अनिश्चित Adobe पोस्ट-उत्पादन कार्यक्रमहरू? को समीक्षा जाँच गर्नुहोस् शुरुआती लागि सबै भन्दा राम्रो फोटो सम्पादन सफ्टवेयर। त्यहाँ तपाईंले धेरै सम्पादकहरू फेला पार्नुहुनेछ जुन प्रयोग गर्न सजिलो छ तर सुविधा-प्याक र छन् ग्यारेन्टी व्यावसायिक परिणाम।
एक हस्ताक्षर शैली पनि बनाउने विचार गर्नुहोस्। एक कस्टम प्रीसेट फिल्टर जुन तपाईंको फोटोलाई एक अद्वितीय व्यक्तित्व दिन्छ तपाईंको शैली बन्छ कलि .् कार्डमतलब, मानिसहरूलाई तत्काल थाहा हुन्छ कि तपाईं छविको पछाडि फोटोग्राफर हुनुहुन्छ।
प्रिन्टको साथ तपाईंको फोटो प्रचार गर्नुहोस्
अब तपाईंलाई सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफहरूको लागि केही आन्तरिक फोटोग्राफी सल्लाहहरू थाहा छ, यो समय हो कि तपाईंले आफ्नो छविहरू म्यागजिनहरूमा कसरी बेच्नुहुन्छ विचार गर्ने बेला भयो। सही मार्केटिंग रणनीतिको साथ तपाईंको फोटोग्राफी व्यवसाय ठूलो हुन सक्छ!
तपाइँको व्यवसाय को अतिरिक्त विज्ञापन मा चुपके को लागी एक राम्रो तरीकाले फ्रेम को उपयोग गर्न को लागी हो पोस्टर तपाईंको आन्तरिक फोटोहरूमा ड्रेसिंगको रूपमा तपाईंको कामको। वा तपाईं आफ्नो फोटोहरू छापिएको पोष्टकार्डहरू सम्भावित ग्राहकहरूको लागि पठाउन सक्नुहुनेछ तिनीहरूलाई देखाउन तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रिन्ट मिडिया प्रयोग गरेर तपाईंको नयाँ फोटोग्राफी व्यवसाय प्रमोट गर्न त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन्। हाम्रो अनलाइन पसल जाँच गर्नुहोस् तपाइँको मार्केटिंग रणनीति को लागी अब प्रिन्ट लिन को लागी!
Close उत्तम क्लोज-अप फोटो लिनको लागि म्याक्रो मोड कसरी प्रयोग गर्ने
मोबाइल फोन फोटोग्राफी सुझाव प्रत्येक फोटोग्राफरलाई जान्नु पर्छ →